DHAGEYSO: Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo si kulul uga hadlay Khilaafka ka taagan doorashada Hirshabeelle – HalQaran.com
DHAGEYSO: Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo si kulul uga hadlay Khilaafka ka taagan doorashada Hirshabeelle
Jowhar (Halqaran.com) – Sheekh Cusmaan Barre Maxamed, guddoomiyaha Baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hadlay khilaafaadka iyo is-qabqabsiga ka taagan doorashada maamulkaas oo haatan wakhtigeeda la joogo.
Guddoomiye Cusmaan Barre oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayaa meesha ka saaray in ay joogsatay shaqadii guddiga doorashada uu magacaabay Madaxweyne Waare, kuwaasi oo shaqadooda bilaabay dhawaana soo saaray habraaca doorashada.
Balse Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Waare ayuu sheegay inuu ka soo hor jeestay habraaca ay soo saareen guddiga doorashada.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa guddiga kula dardaaramay in howsha halkooda ay kasii wataan cid kasta oo doonaysana ka qeyb galka doorashada Hirshabelle ay timaado si ay kaga qeyb galaan doorashada, islamarkaana waqtigeeda ay ku dhaceyso.
Si kastaba, beelaha dega Hirshabeelle ayaa isku heysta jagada uga sareeysa maamulka, iyada oo haatan u muuqanayso mid kasii dareysa.
Halka hoose ka dhageyso Codka Guddoomiye Cusmaan Barre:
Tags: Guddoomiye Cusmaan Barre, Khilaafka ka taagan doorashada Hirshabelle, Madaxweyne Waare
Agaasimaha IMF oo ku baaqday in ‘Afrika’ laga caawiyo dhaqaale xumada uu sababay Covid-19